Dowladda Soomaaliya & Hay’adda ICAO oo heshiis dhexmaray | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya & Hay’adda ICAO oo heshiis dhexmaray
Dowladda Soomaaliya & Hay’adda ICAO oo heshiis dhexmaray
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Montreal ee dalka Canada.
Wafdigaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo Doolista Hawada ee dowladda Federal-ka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Salaad Omaar, Maareeyaha guud ee hay’ada duulista iyo Saadaasha Hawada Yuusuf Cabdi Cabdulle Yusuf jaalle iyo ku xigeenkaiisa Axmed Macalin Xasan.
Wafdiga wasiirka ayaa magaalada Montreal kula kulmay mas’uuliyiinta Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan maamulka Hawada addunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICAO (International Civil Aviation Organization).
Wada-hadalka dhexmaray wafdiga wasiirka iyo xog-hayaha hay’adda ICAO gabadha la yirahdo Fang Lie, ayaa la sheegay in looga hadlay sidii loo dadajin lahaa qorshaha xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso inay si rasmi ah ula wareegto maamulka Hawada Soomaaliya, taasi oo ICAO ay maamulayso tan iyo 1991.
Hay’adda iyo wafdiga wasiirka ayaa kala saxiixday heshiiyo ay ka mid yihiin in xafiiska maamulka Hawada Soomaaliya si dhaqsi ah loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho.
Heshiiska ayaa dhanka xukuumadda Soomaaliya Waxaa u saxiixay wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo Doolista Hawada Maxamed Cabdullahi Salaad, ayadoo dhanka ICAO uu u saxiixay Agaasimaha Xafiiska Farsamada iyo Iskaashiga ee Hay’addaasi Ivan Galan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dowladda lagu soo wareejiyay qalabkii lagu maamuli lahaa Hawada Soomaaliya.
Previous articleDab ka kacay iskuul ku yaala dalka Malaysia oo sababay dhimshada 25 arday
Next articleAmiirka dalka Qadar oo la kulmaya madaxwaynaha Turkiga